Shaqadii Kastamka canshuuraha dekedda Boosaaso oo laga dhigay 24-saac+Sawirro – Radio Muqdisho
Shaqadii Kastamka canshuuraha dekedda Boosaaso oo laga dhigay 24-saac+Sawirro
Wasiir ku xigeenka Wasaaradda Maaliyadda ee maamulka Puntland Axmed Yaasiin Saalax oo shir Jaraa’id ku qabtay xarunta wasaaradda ee Dekedda Boosaaso ayaa sheegay in shaqadii kastomka Cashuuraha ee dekedda Boosaaso laga dhigay 24 Saac si loogu fududeeyo ganacsatada inay alaabooyinkooda ay kala degaan dekedda Boosaaso.
Shirkan jaraa’id oo uu wasiirka ku weheliyay Maamule k/xigeenka dekedda Boosaaso Dhagaxtuur ayay sheegeen in shaqo kordhinta kastamka Dekedda ay ka dabmaysay kaddib markii Maraakiib tiro badan iyo doonyo is biirsaday oo ay dib u dhigeen dabaylihii dhacayay xiliga xagaagu ay ku soo wajahayihiin, qaybtooda ay ku xiran yihiin dekeda Boosaaso.
Maamule K/xigeenka Dekedda oo ugu horrayn hadlay ayaa sheegay in shaqadii kastamka ay gaarsiiyeen ilaa 10 habeenimo si ay ugu adeegaan Ganacsatadda, waxaana uu sheegay in maraakiibtii marka hore ku degi jirtay 5 maalmood, hadda ay ku degaan labo maalmood oo qura.
“ Shaqadii dekeda Boosaaso waa la bilaabnay, maraakiib ayaa soo wajahan, shaqadii dekeduna waxay u badatay maraakiib, waxaanuna go’aansanay inaanu u shaqayno ilaa 10 fiidnimo, shaqadii xiligii la qaban jiray 24 saac aanu ka dhigno si aan u dedajino shaqadii maraakiibta, anagoo baakinga maraakibitu nagu yar yahay awgeed” ayuu yiri Dhagax tuur
Wasiir K/xigeenka maaliyadda maamulka Puntland Axmed Yaasiin Saalax oo safar shaqo ku yimid Boosaaso ayaa sheegay in wasaarada maaliyadda iyo ganacsatadu ay xiriir wanaagsan leeyihiin, waxaana suu sheegay in go’aanka lagu kordhiyay shaqada kastama cashuuraha uu yahay go’aan ka soo baxay madaxda sare ee Wasaaradda, si ay ula qaybsadaa culayska haysta ganacsatada Puntland iyo kuwa Soomaaliyeed.
Dekedda magaaladda Boosaaso oo ah isha dakhli ee ugu weyn Puntland oo xiligii xagaaga ay hoos u dhaceen Maraakiibta iyo doonyaha shixnadaha u sida ganacsatada ee ku soo xirta ayaa maalmahan waxaa laga dareemayaa mashaquul aad u badan, iyadoo markaabii iyo doonyo tiro badan ay ku soo fool leeyihiin , qaarkoodna ay sugayaan in laga dejiyo shixnadaha ay wadaan.
Daawo Sawirrada: Taliyayaasha XDS iyo AMISOM oo ka shiray Howlgal kadhan ah Al-Shabaab
Maxkamad ku taalla Turkiga oo amartay in la soo xiro Fethullah Gülen